Friday, 1 Dec, 2017 2:58 PM
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ को चुनावी प्रतिस्पर्धा धेरैको नजरमा परेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यही मैदानमा भिडिरहेका छन् । राष्ट्रिय नेताको छवी बनाइसकेका उपेन्द्रलाई काँग्रेसले पनि साथ दिएको छ । राजनीतिका पुरानै खेलाडी भएपनि यादव जातिको वर्चश्व रहेको सप्तरीमा भने उपेन्द्र नयाँ खेलाडीका रुपमा भित्रिएका छन् । यो क्षेत्रमा जातीय समिकरणले अर्थ राख्ने विश्लेषण गरिन्छ । तर, तिनै उपेन्द्रलाई चुनौती दिइरहेका छन्, वाम गठबन्धका तर्फवाट माओवादी केन्द्रका उमेश यादवले । ०६४ को निर्वाचनमा सप्तरी–३ मा पराजित यादव ०७० मा ८ हजार ७ सय ४७ मत प्राप्त गरी विजय भएका थिए । सिंचाईमन्त्री हुँदा सप्तरीमा राम्रै बजेट विनियोजन गराउन सफल यादव स्थानीयमाझ लोकप्रिय मानिन्छन् । तर, के उपेन्द्रको फिगरमा उमेशले दबदबा राख्न सक्लान् ? न्यूजसेवासँग उनले उपेन्द्रलाई जित्ने दाबी गरेका छन् । यस्ता छन् उनका आधार :
बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म निरन्तर चुनावी अभियानमा सक्रिय भएर लागेको छु । न मेरो घरदैलो छ न ठूलो आमसभा । म टोल–टोलमा गएर जनतालाई जम्मा गर्ने, आफ्ना कुराहरुलाई राख्ने, जनताका प्रतिक्रिया सुन्ने र समीक्षा गर्दै अगाडी बढ्ने गरिरहेको छु । मसँगै चुनाव लडेका प्रदेशसभाका सदस्यहरु घरदैलोमै लाग्नु भएको छ । उहाँहरुको क्षेत्र पनि अलि सानो भएकाले सहज छ । हाम्रो गठबन्धनका प्रदेशसभा तर्फका उमेद्वारहरुसँग मिलेर प्रचार अभियान चलाई राखेका छौं ।
जमिन्दारको विरुद्धमा जनता
हामी यो संक्रमणकाललाई टुंग्याउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक अभियान बोकेर हिँडेका छौ । हाम्रो पार्टीले संविधानसभामा फरकमत राखेर अघि बढेको थियो । ती विषयवस्तु जनतालाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । सप्तरीको विकास निर्माणको मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिएको छु । मैले चार बर्षमा गरेको कामको मुल्यांकन गर्न जनतालाई आग्रह गरेको छु । राज्यसत्तामा पहिचान र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छु । त्यसैगरि, सप्तरीको सम्मान र समृद्विको अभियनालाई मुल एजेन्डा बनाएर म सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र बाम गठबन्धनका साथीहरुलाई परिचालन गरिरहेको छु । जनताले खास गरिकन सप्तरीको विकास निर्माणको एजेन्डालाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैगरि, जनयुद्ध लडेकाहरुले मधेश आन्दोलनलाई विर्सने र मधेश आन्दोलन गरेकाहरुले जनयुद्धलाई बिर्सने काम भयो । यि त एक अर्काका पुरक हुन्, यिनीहरु एक अर्काको विरुद्वमा किन बिष वमन गर्छ भन्ने जनताको प्रश्न छ । जनताले के पनि भन्छन् भने मधेश आन्दोलन त भयो, जनयुद्धले मधेशका सामन्त र जमिन्दारलाई तह पनि लगायो, तर मधेश आन्दोलनले त्यही सामन्त र जमिन्दारलाई पुनःस्थापित ग¥यो भन्ने गुनासो पनि छ । जमिन्दारहरुको विरुद्वमा, राजनीतिक अपराधीहरुको विरुद्वमा हिम्मतका साथ अघि बढ भनेर जनताले भन्ने गरेका छन् । हामीलाई उत्साहित बनाएका छन् ।
एमाले मधेश विरोधी छैन
कतिपय कुरामा विगतमा हामीले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका थियौं । एक अर्काको विरोधी कित्तामा उभ्भिएका थियौं । तर, अब शान्तिपूर्ण क्रान्तिको विकास सम्भव भएसम्म गर्ने भन्नेमा एकमत भएका छौं । अर्थात् हामीले देखेका सपनाहरु शान्तिपूर्ण ढंगले कतिहदसम्म विकास गर्न सकिन्छ, राज्यसत्ताले कहाँसम्म अवरोध गर्न सक्दैन, त्यहाँसम्म हामीे सँगै जाने भन्ने मुल बाटो एउटै बनाएका छौं । त्यसैले, विगतमा हामीले र उहाँहरुले गरेका कमिकमजोरीहरुमा पनि आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ खालको बाटो कोरिसकेका छौं । यही सप्तरीमा दुईवटा नगरपालिका एमालेले जितेको छ । सप्तरीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले सम्मानजनक मत पाएकै छ । अब एमालेलाई मधेशविरोधी पार्टी हो भन्दै मत नआउने कुरा त छँदै छैन नि ! कम–बढी भन्नै एउटा कुरा होला । मलाई लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचनले जुन अवस्था देखाएको छ, त्यसले अब पुरानो आरोपको खण्डन गरिसकेको छ । सप्तरीमा वाम गठबन्धन एकदमै प्रभावकारी छ । सबै साथीहरु संयुक्त वाम गठबन्धका साझा उमेद्वारहरुलाई जसरी पनि जिताउन पर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ ।
यादव, ठाकुर र महतो जमिन्दारका मतियार
मलाई लाग्छ उपेन्द्र यादव सबै आन्दोलनबाट भागेको नेता हो । उहाँ कुनै समय एमालेबाट भाग्नु भयो, जनयुद्वबाट भाग्नु भयो । राजपासँग गठबन्धन गरेर आन्दोलन गर्दा त्यहाँबाट पनि भाग्नु भयो । त्यसपछि सुनसरी, मोरङबाट पनि भाग्नु भयो । उहाँ चर्चित हुनुहुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । तर, उहाँ ठूलै भगौडा नेता हो भन्ने कुरा त घटनाक्रमले नै पुष्टी गरेको छ । यसलाई जनताले भुलेका छैनन् ।
उपेन्द्र जीले आफ्नो पार्टीबाट मधेश शब्द फाले । राजपाले पनि मधेश शब्द फालिसक्यो । अहिले उमेश यादवसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन भनेर डराएर देउवाको खुट्टा समातेका छन् । हेर्नुहोला, ती सबैको के दुर्दशा हुँदैछ, छिट्टै थाहा पाउनु हुनेछ । सप्तरीका जनताले फैसला गदैछन् । सप्तरीको जनताले भगौडा, सामन्त र जमिन्दारहरुको साँठगाँठलाई परास्त गर्ने छ । काँग्रेसको वर्ग चरित्र र राजपा अनि संघीय समाजवादीको वर्ग चरित्र एउटै हो । मधेशमा जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक उत्पीडन छ । त्यसको लागि त हामीले राज्यसत्तामा पूर्ण समानुपातिकको मुद्वा उठाएका छौं । तर, त्यो पहिचान खोस्ने काम यिनै जमिन्दारहरुले गरेका छन् । यसको विरुद्व हामीले चुनावी मोर्चाबाट संघर्ष गरिरहेका छौ । र, मैले सम्पूर्ण जनतालाई आग्रह गर्ने कुरा के हो भने मधेशका सामन्त र जमिन्दारहरुले पंचायतकालदेखि निरन्तर तपाईहरुको विरुद्वमा षड्यन्त्र गरे । तपाईंहरुको पहिचान खोस्ने काम ग¥यो । जसले महेन्द्रदेखि वीरेन्द्रसम्मको खुट्टा ढोगेर मधेशकै जनतामाथि उत्पीडन गर्ने काम गरेका छन् । ती जमिन्दारको विरुद्वमा लडौं । ती जमिन्दारको रक्षक भनेको नेपाली काँग्रेस हो । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो हो । यी जमिन्दारका मतियारहरुलाई मधेशबाट बढारौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।
उपेन्द्र यादव अन्धजातिवादी
उपेन्द्र यादवले पैसाका बलमा जनताहरुलाई किन्ने काम गरिरहेका छन् । अन्ध जातिवादका नाममा जनतालाई धम्क्याउने र बन्धक बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, यसको दुरगामी असर उहाँहरुले भोग्नुहुन्छ । जनतालाई धम्क्याउने, नोटबाट किन्ने जो शैली उहाँहरुले अपनाउनु भएको छ, त्यसको सजाय पाउनुहुन्छ । डायरीमा नोट गरे हुन्छ, गाउँ गएर घुम्नुहोस्, उनीहरुको पैसा बाँड्ने तरिका सजिलै थाहा पाउनु हुनेछ । उनीहरुले पैसाको खोलो बगाईरहेका छन् । मैले आफ्नो चुनावी खर्च मेरा आफन्तहरु, पार्टी पंक्तिका साथीहरु र शुभचिन्तक समर्थकहरुबाट जुटाएको छु । जनताको मत पैसामा किन्न हुन्न भन्ने मेरो सिद्वान्त छ । मलाई लाग्छ यो अन्धजातिवाद त्यो मधेशका नाममा होस् वा मधेशका कुनै निश्चित जातिका नाममा, मलाई सपोर्ट पनि गर्नु परेन र त्यस्ताको सहयोग पनि मैले लिने गरेको छैन । खासगरी मलाई मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरिव, मुस्लिमहरुले समर्थन गरिरहेका छन् । म जनताको छोरो हुँ । जो जनता हो, त्यसले मलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तर, घाँसभित्रका हरिया सर्पहरुले मलाई निरन्तर ठुँगिरहेको छन् ।
५ हजार मतले हराउँछु
सप्तरीका जनताले मलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नका पठाएका थिए । संविधानसभाको सदस्यको नाताले संविधान निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेँ । आदिवासी, जनजाति र मधेशीका मुद्दाहरु जोडदार ढंगले पार्टी र संविधानसभाभित्र उठाएँ । निर्वाचनमा जितेपछि निरन्तर जनतासँग सम्बन्ध बनाइराखेँ । सप्तरीको विकास निर्माणको सन्दर्भमा मैले जतिपनि काम गरेको छु, यहाँका जनता साक्षी छन् । निर्वाचनबाट चुनिएर जानेहरुमध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै जनतामा फर्किएर आउने, विकास निर्माणका काम गर्ने र बजेट ल्याउने कुरामा म पहिलो पात्र हुँ । मेरो जित्ने आधार यिनै हुन् । म दलित, मुस्लिम, सर्वाहारा वर्गसँग मिलेको छु । मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गसँग पनि उत्तिकै निकट छु । राजविराजका व्यवसायीहरु, जसलाई पहिले माओवादीको नामवाट अलि त्रसित बनाउने काम कसैले गरेको थियो । उनीहरुलाई माओवादीको विरुद्व उभ्याउने काम गरिएको थियो । तर, तिनै मध्यमवर्गिय तप्काले मलाई जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए र अहिले पनि उनीहरुले मलाई झनै विश्वासका साथ सहयोग गरिहरहेका छन् । मलाई विश्वास छ कम्तिमा ५ हजार मतले उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्छु ।